विधेयक प्रमाणीकरणको प्रक्रियामा संकट, सभामुख चयनको प्रक्रिया कसरी, कहिले अगाडि बढ्ला ? - Ujyaalo Nepal
विदेशमा रहेका नागरिकलाई स्वदेश फर्काउने यस्तो छ सरकारको तयारी
विधेयक प्रमाणीकरणको प्रक्रियामा संकट, सभामुख चयनको प्रक्रिया कसरी, कहिले अगाडि बढ्ला ?
By ujyaalo	 Last updated Oct 9, 2019 28
काठमाडौँ, २२ असोज । संघीय संसदका सभामुख कृष्णबहादुर महराले राजीनामा दिएपछि नयाँ सभामुख निर्वाचनको विषयले चर्चा पाएको छ ।दशैं विदामा पनि यसबारेमा सत्तारूढ नेकपाका नेताहरू वीच अनौपचारिक छलफल भएका छन ।
नयाँ सभामुख चयन नियमित वा विशेष अधिवेशनमा गर्ने भन्नेबारे परामर्शमा नेकपा नेताहरू भित्र भित्रै सक्रिय भएको छन । अधिवेशन र पात्रबारे अनौपचारिक परामर्श भने सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) चलाएको छ । सभामुखबाट महराले दिएको राजीनामापछि सभामुख रिक्त छ ।
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार, सभामुख वा उपसभामुख फरक राजनीतिक दलको हुनुपर्छ । सभामुख वा उपसभामुखमध्ये एक फरक लिङ्गको हुनुपर्ने पनि संवैधानिक व्यवस्था नै छ । अहिले उपसभामुख तत्कालीन एमालेबाट निर्वाचित भएकी डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फे छिन् ।
यसअघि सभामुखमा माओवादी केन्द्रबाट महरा उम्मेदवार बनेका थिए । दुई दल एकीकृत भएपछि विपक्षी दलले पुनः निर्वाचनको माग गरे पनि सशक्त कार्यसूची भने बनाउन सकेको थिएन ।
नेकपाका नेताहरूले भने पात्र र सभामुख चयनको मितिबारे औपचारिक रूपमा कुनै पनि छलफल नभएको बताउदै यसबारेमा चुप छन । । अब सभामुख चयनको प्रक्रिया दलीय सहमतिमा नै अघि बढ्ने नेताहरूले बताउने गरेका छन  । व्यक्तिबारे कुनै छलफल गरेका छैनौँ  भने पनि भित्री रस्साकस्सी भने सुरू भैसक्या छ । सम्भवतः अब अर्को अधिवेशनमा नै सभामुख चयन प्रक्रिया अगाडि बढ्छ ।